सोनम कपूरको बिहेमा पुनः एकपटक देखियो अभिषेक र ऐश्वर्याको सम्बन्धको सच्चाई
एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री सोनम कपूर र आनन्द आहुजाको ‘वेडिङ रिसेप्शन’ मा बलिउडका धेरै स्टारहरुको उपस्थिती रहेको थियो । सोनम र आनन्दलाई बधाई दिनको लागि ऐश्वर्या र अभिषेक पनि उक्त समारोहमा उपस्थित भएका थिए ।
बलिउडका जोडी : जो एक–अर्कालाई गर्थे अगाध प्रेम, तर किन टुट्यो सम्बन्ध ?
एजेन्सी । भनिन्छ मानिसको जोडी माथिबाट नै भगवानले बनाएर पठाएका हुन्छन् । सायद, यो भनाई साँचो हो किनकी चलचित्र उद्योगमा यस्ता धेरै उदाहरण भेटिन्छन् । जहाँ गहिरो प्रेममा परेका जोडीहरुको पनि सम्बन्ध टुटेर अर्कैसँग बिहे भएको छ ।
कालो हरिण शिकार काण्ड : जोधपुर पुगे सलमान खान, अर्को सुनुवाई १७ जुलाईमा
एजेन्सी । बलिउडका दबंग सलमान खानलाई अझै पनि कालो हरिण शिकारको केशबाट छुटकारा मिलेको छैन । भर्खरै फिल्म ‘रेस’ को शुटिङ सकेका उनी जोधपूरमा सुनुवाइृको लागि पुगेका छन् ।
भारतीय अभिनेत्री करिष्मा कपूर काठमाडौँमा
काठमान्डौं । बलिउड अभिनेत्री करिष्मा कपूर नेपाल आइपुगेकी छिन् । एक ब्यापारीक प्रयोजनका लागि उनी भारतबाट सोमबार बिहान ८ः३० मा नेपाल आइपुगेकी हुन् ।
रहस्यमै श्रीदेवीको मृत्यु, आखिर के–के भएको थियो त्यो रात कोठा नं २२०१ मा ?
एजेन्सी ।सन् १९७८ मा ‘सोलहवाँ सावन’ मा मुख्य कलाकारको रुपमा बलिउडमा प्रवेश गरेकी श्रीदेवीले आफ्नो जीवनको ४ दशकमा डेढ सयभन्दा बढी चलचत्रिमा अभिनय गरिसकेकी थिइन् ।
पहिलो पटक जया बच्चनले अमिताभको निजि जिन्दगीबारे खोलिन् यस्तो राज
एजेन्सी । बलिउडका महानायक अमिताभ बच्चनलाई निकै असल व्यक्तिको रुपमा लिइन्छ । उनको अभिनय र निजि जीवनका पाटाहरु निकै सुन्दर मानिन्छन् ।
बिहे भएको ११ वर्षपछि के भन्छन् अभिषेक र ऐश्वर्या ?
एजेन्सी । बलिउड अभिनेता अभिषेक बच्चन र ऐश्वर्या राय बच्चनको बिहे भएको ११ वर्ष पुगेको छ । यी दुईले एक वर्षको प्रेम सम्बन्धलाई २० अप्रिल २००७ मा विहेमा परिणत गरेका थिए । विहे गर्दा अभिषेक ३१ वर्ष र एश्वर्या ३३ वर्षकी थिइन् ।
बलिउडको पहिलो ‘बोल्ड फोटो शूट’, जुन ६७ वर्ष पहिले यी अभिनेत्रीले गरेकी थिइन्
एजेन्सी । आजभोलि ‘बोल्ड फोटो शूट’ गराउनु सामान्य भइसकेको छ । हरेक चर्चित पत्रिकाको कभर पेज अभिनेत्रीहरुको बोल्ड फोटोले भरिएको हुन्छ । तर यस्तो फोटो शूट ६७ वर्ष पहिले कस्तो थियो ? के तपाईले कहिल्यै सोच्नुभएको छ ?